Thrips | October 2019
Editor Ee Doorashada October 22,2019
Ugu Weyn Ee Thrips
Mabaadi'da daryeelka ee chlorophytum
Chlorophytum waa geed caan ah oo leh caleemo cagaaran oo cagaaran oo ku yaal meel kasta oo guri ah. Warshadu uma baahna daryeel. Iyo in this article waxaan ka hadli doonaa sida loo abuuro chlorophytum iyo daryeel ee warshadda. Aynu ogaanno siyaabaha aad ku dhajin kartid chlorophytum, u sheeg cayayaanka iyo cudurrada dhirta Tani ma taqaan?
Yaanyada kordhay ee Ural: noocyo noocan oo kale ah waxay ka fiican yihiin dhirta iyo sida loo daryeelo?
Zinnia: sida ay u koraan abuurka ee dhulka furan
La-dagaallanka cayayaanka yaryar - khaanadaha waxyeellada leh
Cunto-fareemka yaabka leh: sawirrada ubaxyada iyo talooyin ku saabsan helitaanka guriga
Cabbirrada wajiga ee ugu caansan ee lagu ciyaaro guriga
Tamaandhada "Klusha" waxaa si toos ah loogu yeeri karaa natiijo aad u fiican oo ku saabsan shaqada jadeecada gudaha. Waxay soo jiidataa bannaanka u leh baadiyaha is haysta, halka beeraleyda waxaa lagu riyaaqay marxaladaha hore ee tamaandhaynta. Laakiin labadaba kuwa kale iyo kuwa kale waxay ku qoranyihiin tiro khaas ah oo miro ah oo gacmaha ku jira duurka dhirta. Dheeraad ah ee maqaalka ah waxaan ka fekereyn doonaa sharaxan kala duwan ee tamaandhada, kuu sheegi sida loo koro yaanyadaas, waxa xun ee tiknoolojiyada beeraha kaa caawin doona si aad u hesho natiijada ugu fiican. Read More
Rikoodh wax soo saarka - noocyo geed oo tufaax ah "Antonovka caadiga ah"
Caleenta caadiga ah ee lo'da: sida loo daryeelo, iyo sida loo quudiyo guriga
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Thrips 2019